Sakafo Dimy Mety Tsy Ho Telin’ireo Tsy Vietnamiàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2017 15:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Português, Türkçe, 日本語, 繁體中文, বাংলা, नेपाली, Română , Italiano, Deutsch, English
Central Market, My Tho, Vietnam. Sary an'i Milei.vencel. Wikipedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
Ity lahatsoratra nosoratan'i Tiến Nguyễn ity dia avy ao amin'ny Loa, tranonkalam-baovao iray sy tetikasa fampielezampeo amin'ny aterineto an'ny Viet Tan izay mandefa tantara momba an'i Vietnam. Averina avoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty amin'ny Global Voices.
Samy manana ireo sakafony manokana. mety holazain'ny sasany ho mahagaga mampivanàka, ny firenena tsirairay: Misy ny tuna eyeballs ao Japàna, ny atidohanà rajako ao Shina ary ny olitra fraomazy ao Frantsa. Ireto ny lisitr'ireo sakafo dimy hitako ho mampivanàka indrindra amin'ny hainahandro Vietnamiana ka tokony ho fantatrao.
Lamokan'atodin-gàna – Hột Vịt Lộn aka Balut
Sary: Flickr / shankar s. (CC BY 2.0)
Ny Balut dia lamokan'atody, nampangotrahina sy hanina anaty akorany. Eo amin'ny faha-19 sy faha-21 androny, efa matoy tsara ny fanjary tsaikan'ny gàna ka hahatsapanao ny fikarepok'ireo taolana. Ny fomba tsara indrindra hihinanana ity sakafo mafilotra ity dia somary ampiana sira kely, trohana ny ranony ary tsakoina miaraka aminà ravina rau răm na koriandra Vietnamiàna (fanomezana hanitra ny sakafo).
Pizza Vietnamiàna – Tiết canh
Sary : Flickr / Petr & Bara Ruzicka (CC BY 2.0)
Raha mpankafy pizza ianao, tokony hanandrana ity karazana “pizza Vietnamiàna” na tiết canh ity. Ireo taharo ao anatiny dia ahitàna ny voanjo, ravina koriandra, trondro saosy, sokay — ary ny taharo fototra dia ny ràn-gàna. Ity ny torohevitra ara-tsakafo manana ny lanjany : ilaina ho tena vaovao ilay rà! Ambara fa vonona ny hohanina ilay sakafo rehefa mivaingana ilay rà, mbola mena ny lokony ary rehefa manainga azy amn'ny sotro ianao dia mijanona ho mivaingana ilay ràn-gàna.
Bibikely/olitra avy amin'ny voanio – Con Đuông Dừa
Pikantsary Bibikely/olitra amin'ny voanio – Con Đuông Dừa. Sary : YouTube
Mety hirefy telo hatramin'ny dimy santimetatra eo ny halavan'ireto bibikely matavitavy sy milamadamaka ireto. Any anaty hazonà voanio any izy ireto no miaina ary mandany ny androm-piainany amin'ny fandavahana lavaka sy mampitombo taranaka. Rehefa tsy afaka miaina intsony ilay hazo noho ny ataon'ireo mponina masiaka ao anatiny, dia mazàna no tapahana ilay ampahany simba mba hahafahany mitsiry indray, ary dia midaboka eo ilay tohotra.
Misy fomba maro samihafa fahandroana itony bibikely mahafatifaty itony, fa ny tena malaza indrindra dia ilay antsoina hoe “Olitra milomano anaty trondro saosy”. Atsipy fotsiny ry zareo ho ao anaty lovia feno saosinà trondro, ary dia hanina velona amin'iny ry zareo milomano iny. Lazaina ho mafomafotra, be otrikaina sy tena matsiro ry zareo ireto. Ity no hatsaràna iray tena nankafizin'ilay mpanjavavavy farany tao Vietnam.
Voalavo – Chuột Đồng
Loharano : Flickr / Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)
Tsy ireo mahazatra anao hita any an-tokotany, na ireo mpandeha eny anaty rano maloto akory ireto voalavo ireto, fa ireo voalavo eny ambanivohitra miaina eny an-tanimbary. Tsy mavoroka loatra toy ireo voalavo any an-tokantrano ry zareo, ary tena malaza manokana mihitsy rehefa fotoana fijinjàna. Matetika mifandamina manao andiany ireo tantsaha ary mahasambotra hatramin'ny voalavo 100 isaky ny lavaka. Ny fomba tsara indrindra hahandroana azy ireto dia ny fanantonoana azy anaty vilany misarona, avy eo atsoboka anaty lovia misy trondro saosy miaraka aminà manga manta. Toa hoe toy ny tsironà henam-bibidia nohazaina izy ireto!
Jorery nendasina na koa Lalitra Maina – Vè Sầu Chiên
Jorery voaendy. Sary an'i Hhaithait. Wikipedia Commons. (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)
Zavatra iray ankafizina ao Vĩnh Long, itony bibikely toa lalitra itony saingy lehibe kokoa. Lazaina fa manana hery mahagaga manasitrana ankizy marary izy ireny, farafaharatsiny araka izay nambaran'ny renibeko ahy. Ao anatin'ny tena hatsarany izy ireny raha iny ilay vao avy niofo iny indrindra, araka izany dia tena mbola malefaka ny henany, azonao endasina, ampangotrahana ary hanina miaraka aminà ron-dasopy na saosy lafarinina.
Efa nanandrana iray tamin'ireto ve ianao? Mba ampahafantaro anay izay sakafo nahagaga indrindra efa nohaninao! Mazotoa homana!
Amin'ny fihainoana ity rakipeo ity, fantaro misimisy kokoa ny momba ireny sakafo Vietnamiàna ireny :